ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ခင်မောင်တိုး - ချစ်သူသိစေ
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 1:52 PM
အချစ်နတ်ဖမ်းစားခံရရင် ပို့စ်ကောင်းလေးတွေ ထွက်တတ်တယ်ဆိုပဲ..
You are in love....
ခင်မောင်တိုးသီချင်းတွေကတော့ အမြဲလိုမဟုတ်တောင် အခါတလေ အရမ်းနားထောင်လို့ သီချင်းတွေပါ။
ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့စာသားတွေကိုက စွဲလန်းစရာပါပဲ
အဲဒီသီချင်းကို ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်တယ်ခင်ဗျ။ စာသားတွေက အနက်အဓိပ္ပါယ် အပြည့်ရှိတယ်လေ။
ပန်းပွင့်ရှိမှ ရနံ့ရတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့စာသားကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
It isapoem. I think the poet is mg sein win (ba tee gone)
very nice mentioned of Ko Khin Maung Toe's songs Linlet !
သူတို့ လင်းလက်ကို မနာလိုလို့အဲလိုရေးတာဖြစ်တယ်. တင်ပြတာရှိရင်တင်ပြပါ. ကဲ့ရဲ့တဲ့လူတွေပဲရှက်ရမှာဖြစ်တယ် သူတို့ပဲအပြစ်ရှိတယ်
hi sister, visiting u r blog, nice to read, listen music, ..